Git Sangit News » के हस्तमैथुनले शरीरलाई हानी गर्छ ? जानिराखौ,
के हस्तमैथुनले शरीरलाई हानी गर्छ ? जानिराखौ,
एकथरीको तर्क छ, हस्तमैथुनले स्वास्थ्यमा कुनै हानी छैन । बरु, यसले यौन आवेग शान्त गर्छ । यौन कुण्ठा हटाउँछ । मनोविकार हटाउँछ । अर्को फाइदा त के भने, हस्तमैथुनले बलात्कार जस्ता आपराधिक क्रिया कम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । किनभने यसले क्षणिक रुपमा यौन उत्तेजना शान्त गर्छ ।
तर, किशोरअवस्थमा पुगेपछि बढ्दो यौन चाहाना शान्त गर्न किशोर/किशोरीले यौनाङ्गमा स्पर्श गर्छन् । उनीहरुले यो कुरा खुलेर बाहिर भन्दैनन् । र, उनीहरुलाई लाग्छ, ‘कतै मैलें नराम्रो काम त गरिरहेका छैन ?’ यस्तै भावनाले उनीहरुमा हिनताबोध पैदा हुनसक्छ ।
यौनाआनन्द लिनका लागि जब आफ्नो यौनाङ्ग स्पर्श गरिन्छ, हस्तमैथुन त्यही हो । हरेकले यो आ-आफ्नै ढंगले गर्छन् । हस्तमैथुनको क्रममा उनीहरु यौनजन्य दृश्य, वस्तु आदिको कल्पनामा डुब्छन् ।
हस्तमैथुन गर्नु गल्ती होइन । यो आनन्द अनुभूत गर्ने प्राकृतिक तरिका हो । यसले स्वंमलाई आनन्द दिलाउँछ । यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा पनि हो । सार्वजनिक स्थानमा यस्तो काम गर्नु गैर कानुनी मानिन्छ ।
ख्याल गर्नुपर्ने कुुरा के भने, यसरी हस्तमैथुन गर्दा सही र सुरक्षित ढंगले गर्नुपर्छ । घाउ, चोट लाग्ने, अड्कने, ब्याक्टेरिया फैलने कुरामा सर्तक हुनुपर्छ । फोहोर एवं असुरक्षित चिज प्रयोग नगरौं ।
प्रकाशित मिति ५ माघ २०७६, आईतवार ०७:५६
फेरि लो’भलाग्दो देखियो पुनर्जीवित रानीपोखरी,